5 Mampiato ny data sy ny vinavinan'ny varotra ratsy | Martech Zone
Sabotsy 28 Novambra 2015 Sabotsy 28 Novambra 2015 Douglas Karr
Vao haingana izahay no nanao fitsapana fanandramana traikefa an'ny mpampiasa momba ny tranokalanay, ary nizara roa ny valiny. Tian'ireo mpijery ny atinay saingy sosotra tamin'ny dokam-barotra nataonay - indrindra ny toerana nidobohany na nipoitra. Na dia teo aza ny fanandramana nanamarina ny fametrahana ny tranokalanay, ny fanamorana ny fivezivezena ary ny kalitaon'ny atiny - dia nanondro zavatra iray izay nahasosotra ny mpihaino anay koa izany.
Ity fanapahana ity dia zavatra izay saika mandanjalanja ny mpivarotra rehetra, ary matetika ny raharaham-barotra no manohitra ny fihetsika na ny hevitry ny mpijery. Ny tsy fihainoana ny mpihaino anao dia mifanohitra amin'izany, mazava ho azy, ho an'ny ankamaroan'ny mpanolo-tsaina guru marketing any izay mino fa ny mamaly, ny mihaino ary ny manaraka ny torohevitry ny mpanatrika dia tokony ho loha laharana hatrany.
Ireto ny 10 Data Disconnects sy ny Marketing Assumptions izay matetika ataontsika izay mahatsiravina amin'ny orinasantsika.
Mihevitra fa mitovy ny mpanjifa rehetra - MarketingSherpa tato ho ato nanome fanadihadiana ny antony hanarahan'ny mpanjifa marika amin'ny media sosialy. Asehon'ny tabilao mazava fa ny ankamaroan'ny mpanjifa dia manaraka marika amin'ny tambajotra sosialy ho an'ny fihenam-bidy, sweepstakes, tapakila, sns. Ny fihenam-bidy madio dia mety hampihena ny marikao ary handevina ny orinasanao. Vonona ny hiloka aho fa ireo mpanjifa izay nahita lalao nifanaraka tamin'ny fiainana sy nanohana ny asa soa nataon'izy ireo dia tena maharitra lavitra amin'ny fahasalaman'ny orinasa iray.
Raha heverina fa mpitsidika rehetra ny mpitsidika - Fantatrao ve fa ny fifamoivoizana Bot dia mitentina 56% mahery Analytics manaraka ny fifamoivoizana mankany amin'ny tranokalanao? Rehefa mandika ny Analytics angon-drakitra, ahoana ny fiatraikan'ny bots amin'ny pejy fidirana sy fivoahana, ny tahan'ny fihenam-bidy, ny fotoana an-tranonkala, sns.? Mety ho diso be loatra ny statistikan'izy ireo ka manosika anao hanova ny tranokalanao ho valiny… fa ny valiny dia ny botitra, fa tsy ny fanantenana! Rehefa mandinika ny tranokalanay izahay dia mifantoka bebe kokoa amin'ny fitsidihana kalitao - olona mitsidika pejy maro ary mandany mihoatra ny iray minitra amin'ny tranokalanay.
Raha heverina fa hanatsara ny vokatrao ny valin'ny valin'ny mpanjifa - Niasa tamina mpamatsy vola SaaS goavambe aho izay nanana fandaharam-pivoarana mahery vaika izay nampiditra fanatsarana an'arivony sy endrika am-polony maro isaky ny famoahana. Ny valiny dia sehatra midedadeda izay be pitsiny loatra, sarotra ampiharina, niteraka adim-pivoarana tsy nisy farany, ary nampihena ny fitazonana ny mpanjifanay. Vokatr'izany dia nanjary mahery vaika ny varotra, nampanantenaina ny fisehoana bebe kokoa ary nanomboka ny tsingerina rehetra. Raha nitombo ny vola azon'ny orinasa ary novidiana tamin'ny vola be dia be izy ireo, mbola tsy nahazo tombony ary toa tsy izany. Rehefa manontany ny mpanjifa ianao hoe inona no tokony hatsaranao, avy hatrany dia mikaroka lesoka ny mpanjifa ary manome ny fanehoan-kevitr'izy ireo sy anecdotal. Tokony hojerenao kosa ny fihetsiky ny mpanjifanao fa tokony hatao laharam-pahamehana ny fanatsarana ny vokatrao.
Mihevitra ny fahatapahana manelingelina Prospect - Nosedraina hatrany hatrany izahay ary, tsy misy fialantsiny, saika mampiditra teknolojia manelingelina foana izahay hisintonana ny sain'ny mpitsidika ary asainay manapa-kevitra izy ireo raha hifandray bebe kokoa amin'ireo mpanjifantsika na tsia. Anontanio ny mpitsidika anao raha tian'izy ireo ny fomba fampiroboroboana fanaparitahana apetrakao ary, matetika kokoa izy ireo dia milaza izy ireo tsia. Fa apetraho avy eo ireo fomba fampiroboroboana dia ho hitanao ireo mpitsidika izay nilaza fa tsy tian'izy ireo izy ireo no manindry sy mifandray aminao.
Raha heverinao fa mahatakatra ny mpanjifanao ianao - Matetika ny mpanjifanay dia mieritreritra ny antony ividianan'ny olona amin'izy ireo - ny vidiny, ny fahazoana, ny fihenam-bidy, ny serivisy ho an'ny mpanjifa sns sns ary saika diso foana. Rehefa manontany ny mpanjifa ny antony nividianany taminao ianao dia mety hilaza aminao ny antony tsy mety mihitsy aza izy ireo. Rehefa miantehitra amin'ny fanondroana voalohany na farany ianao, dia mihevitra ho ratsy ihany koa. Ny angona Attribution dia mety hanome porofon'ny fahatsinjovan-kevitra fa handray andraikitra, fa tsy ny antony tena nanaovan'izy ireo ny fividianana. Fikarohana persona dia zava-dehibe amin'ny fahatakarana iza no nividy taminao ary afaka mamaly ireo tafatafa avy amin'ny antoko fahatelo tsy miangatra ny antony nividianany taminao. Aza mieritreritra hoe fantatrao, mety ho gaga ianao amin'ny valiny.
Ny fehiny eto, mazava ho azy, dia hoe tsy azo atao mihitsy ny manasaraka fitarihana mahafeno fepetra marketing avy amin'ny sisa amin'ny Analytics tahirin-kevitra. Tsy maintsy manapa-kevitra amin'ny varotra amin'izay mahasarika sy mampiditra an'io ampahany io ianao. Tsy eo ny tranonkalanao hampifaly ny olona rehetra; tokony hoheverina ho toy ny loharanom-barotra izay mahasarika sy mampiditra ny mpitsidika azy io, mitondra azy ireo mankany amin'ny fiovam-po.
Nanao hadisoana toy izany koa aho tamin'ny orinasako. Betsaka ny olona nihaino ahy na oviana na oviana ny fividianana ny vokatrao na ny serivisinay dia milaza amiko ny fomba tokony hanovako ny tolotra sy ny fandaniantsika. Saika nanala antsika amin'ny orinasa izany. Tsy mihaino an'ireto olona ireto intsony aho - mandohalika fotsiny aho ary manao izay fantatro fa mety ho an'ny mpanjifanay. Ny mety ho azy ireo dia tsy izay mety aminao na amiko.
Atsaharo ny fihainoana ny varotra amin'ny fihainoana sy ny fijerena rehetra izay mikasika ny marikao. Atombohy ny fanatsarana ny traikefa amin'ny mpihaino izay zava-dehibe… ny mpihaino izay mety hividy aminao.
Tags: fanehoan-kevitry ny mpanjifatapaka ny datadiv popupdokam-barotra manelingelinatombantombana amin'ny marketinglesoka marketingfitarihana mahafeno fepetra marketingpop upfisondrotanampitsidika mifanohitra amin'ny vinavina
Mitombo: Manamboara ny Dashboard Marketing Internet Farany